မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ: May 2008
သည်းခံခြင်းသည် အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လေ။ တစ်ကယ်သည်းခံနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဆုံး အစွန်ထိတော့ သည်းခံနိုင်တဲ့လူ တော်တော်လေးရှားပါတယ်။
အဲလိုရှားတဲ့အထဲမှာ ကျနော်မပါတာသေချာပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်ကတော့ သည်းခံနိုင်လောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ လေးကျော်သွားရင်တော့ ပြန်တုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော့်လက်တွေ ခဏခဏ သွေးစွန်းနေရတာ ပေါ့ဗျာ။
တစ်ကယ်တော့ ကျနော်လည်း ဘယ်လုပ်ခြင်ပါ့မလဲဗျာ။ ပထမတော့ ကျနော်က သည်းခံနေပါသေးတယ်။ သည်းခံနေတာကို အခွင့်ကောင်းယူနေတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့လေ။ ကျနော်လည်း ဆက်မသည်းခံနိုင်တော့ စိတ်ရှိလက်ရှိ လုပ်လိုက်ရတာပေါ့။
စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ နေ့ဆိုလည်းတစ်မျိုး ညဆိုလည်းတစ်ဖုံ နေ့တိုင်းကို လိုက်အနှောင့်ယှက်ပေးနေတာတော့ လွန်လွန်းတာပေါ့။ မလုပ်ချင်လို့ငြိမ်နေတာကို ကြောက်နေတယ်လို့ထင်နေလို့လားမသိဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဟိုစကားလိုပေါ့ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြရတာပေါ့။
အဲလိုနဲ့ ကျနော့်လက်တွေ သွေးစွန်းကုန်တာပေါ့ဗျာ။
ကျနော့်လက်မှာ စွန်းသွားတဲ့သွေးတွေဟာ အမှန်တစ်ကယ်တော့ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေပါပဲ။
ခက်တာက ကျနော့်မှာ အိပ်တဲ့အခါ ခြင်ထောင် ထောင်အိပ်တဲ့အကျင့်မရှိတော့ အိပ်တော့မယ်ဆိုရင် မီးပိတ် အိပ်ပြီးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့က တ၀ှီ ... ၀ှီ ...၀ှီ နဲ့ဗျာ ဘယ်လိုမှ ကောင်းင်းအိပ်လို့မရဘူး။
အဲမနက်မိုးလင်းတော့လည်း ဗိုက်ကြီး တကားကားနဲ့ မထနိုင် မပျံနိုင်ကြတော့လောက်အောင် ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေကို မတော်မတရားစုတ်ထားကြတာလေ။
အဲလိုတွေ တွေ့တော့ ကျနော်လည်း စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ စိတ်ရှိလက်ရှိကို ဆော်ထည့်လိုက်တယ်
`` ဖြောင်း´´ သေစမ်းဟဲ့ ခြင်စုတ်ပလုတ်
အဲလိုနဲ့ပဲ ကျနော့်လက်တွေ သွေးစွန်းကုန်တာပေါ့ဗျာ . . . ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 12:21 AM6ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တၝဲဟံသာဝတှလီု ပေံင် (၂၅၁) သႝာံ
Mon Kingdom Hongsarwatoi Fallen Day
၁၃၇၀ခု၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၈ရက်နေ့သည် ဟံသာတီမွန်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးခြင်း နှစ်ပေါင်း (၂၅၁) နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဟံသာတီမွန်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးခြင်း (၂၅၁) နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို နိုင်ငံတကာမှ မွန်လူမျိုးများပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တစ်နေရာမှ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၁ နှစ်တွင် သေချေခဲ့ကြသော မွန်သံဃာတော်များ မွန်ပြည်သူများအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပြီး အမျှအတန်းဝေခဲ့ကြပါသည်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:25 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
၁၃၇၀ခု ၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် မေလ၊ ၂၀ရက် ကျနော်မော်စီသည် လက်ဆော့မိသောကြောင့် တမ်းပလိတ်ပြောင်းလိုက်ရပါသည်။
အကြောင်း အစုံအလင်မှာ . . .
မအားတဲ့ကြားက လက်ဆော့မိလို့ ပြောင်းလိုက်ရတဲ့ ကျနော်တမ်းပလိတ်အသစ်လေးပါ။ လက်ဆော့မိလိုက်တာ sidebar က ကျနော့်လင့်တွေတစ်ခုမှ မကျန်အောင်ပျက်သွားတော့ တမ်းပလိတ်ပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။
ဘယ်သူမပြု မိမိအမှုတဲ့လေ။ ကိုယ်က ဖျက်မိတော့ ကိုယ်ပဲ ပြန်ပြင်ရတော့တာပေါ့။ အင်း နောက်တစ်ခါဆို လက်မဆော့ရဲ့တော့ဘူး မအားပါဘူးဆိုနေမှ တမ်းပလိတ်ကပျက်သွားတော့ အလုပ်တစ်ခုပိုသွားတာပေါ့ အဲဒါကြောင့် ပိုပြီး အိပ်ရေးပျက်လာတယ် အိပ်ရေးပျက်လာတော့ နေထိုင်ရတာ အလန်းဆန်းဘူးပေါ့။
နေထိုင်တာမလန်းဆန်းတော့ စိတ်ကမရွှင်ဘူးလေ စိတ်မရွှင်တော့ လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေက အရာမတွင်ပြန်ဘူးပေါ့ အင်း ဆက်ရေးနေရင် ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး ဒီလောက်နဲ့ရပ်ထားတာပဲကောင်းပါတယ်လေ။ အချိန်လေးရတာနဲ့ ပိုစ့်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေမှာပါ လာလည်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 1:48 AM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် ဘလော့လောကမှ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ နားမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဗျာ အခုတော့ ကျနော်ခေတ္တခဏ နားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:24 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှ ရန်သူနှစ်ပါးကနှိပ်စက်လို့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ အလူးအလဲကိုခံနေရပါတယ်။ အင်း ရန်သူမျိုးငါးပါးစလုံးသာနှိပ်စက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကယ့်ကိုမတွေးဝံ့စရာပါဗျာ။ မင်းနှိပ်စက်ဒဏ်ကို အနိုင်နိုင်ခံနေရတဲ့ကြားက နာဂစ်ကပါ ထပ်နှိပ်စက်လိုက်တော့ အင်း ကြေကွဲစရာတွေပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဘာလို့ဒုက္ခများနေရသလဲဗျာ။ အခုနာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးတဲ့လူတွေ ၅ သောင်းကျော်ရှိနေပြီးလို့သိရပါတယ်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေလည်း တစ်သိန်းကျော်နေပါပြီး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်း သောင်းပေါင်းများစွာရှိနေဆဲပါ။ ဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ အားကိုးရာမဲ့နေပါတယ် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေကြရောပေါ့ မိသားစုတွေတစ်ကွဲတစ်ပြားနဲ့ အင်း တွေးကြည့်တာနဲ့ တစ်ကယ့်ကို ပူဆွေးမိတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီဒုက္ခပင်လယ်ကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေဗျာ။
မုန်တိုင်းသတင်းနှင့် ပက်သက်လို့ ကျနော်သိသလောက် ဘလော့တွေမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ ဘလော့တွေမှာ လှူဒါန်းနိုင်တဲ့နေရာတွေရော နောက်ထပ် သတင်းရရှိနိုင်မယ့် နေရာတွေပါ ညွှန်ပြထားပါတယ်ဗျ။
ကျနော်တို့မြန်မာပြည်သူများ ဒုက္ခဆင်းရဲဒဏ်မှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:46 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
မုန်တိုင်းကတော့ တော်တော်လေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါပြီး။ ပြည်သူများလည်း တစ်ချို့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီး။ ဖုန်းတွေလည်း ဆက်လို့မရပါဘူး အင်တာနက်လည်း မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဓါတ်တိုင်တွေလဲကုန်တော့ မီလည်းမလာပါဘူး။ မီးမလာတာကတော့ ပြည်သူတွေနေသားကျနေပါပြီး။ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း လုပ်နေကြပါပြီးလို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူများ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ရန်ကုန်အခြေအနေနဲ့ပက်သက်လို့ ကိုဒီရေ ဘလော့မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်
ရေးသားသူ မော်စီ at 5:55 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
အမှန်တရားအတွက် ကြက်ခြေခတ် ( X )
အင်း အခုတလော No တို့ ကြက်ခြေခက် ( X )တို့ ခေတ်စားနေတယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့ ခေတ်စားနေတာလဲဆိုတာကို ကျနော့်ရဲ့အမြင်တွေကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ကြက်ခြေခတ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာကိုဆိုလိုလည်းဆိုတာ လူတွေအားလုံးနီးပါသိနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျနော်တို့ အမှန်တရားအတွက် ဘာကြောင့် ကြက်ခြေခက်ရတာလဲ? ကြက်ခြေခက်က ဘာကြောင့် အမှန်တရားအတွက် ဖြစ်နေရတာလဲ? ဘာကြောင့်တွေ အရမ်းများနေပါလိမ့်မယ်။
စစ်အစိုးရကထုတ်တဲ့ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းမဖတ်ရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်ကို ၀ယ်ဖတ်နေရလို့ပါပဲ။ အမှန်ဆိုရင် ဒီလိုစာအုပ်ကို အလကားဖြန့်ဝေသင့်တယ်ဗျ။ ဒါမှ ပြည်သူတွေလက်ထဲရောက်မယ် ပြည်သူတွေဖတ်ပြီး သဘောတူရင် ထောက်ခံကြမယ် သဘောမတူရင် ကန့်ကွက်ကြမယ် ဒီလိုမှပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမှာပေါ့။ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို လူတိုင်းဖတ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တော့ထင်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ခန့်မှန်းခြေ ပြည်သူတွေ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် မဖတ်နိုင်ကြဘူးလေ။
တစ်ချို့ကြတော့လည်း သဘောမကျပေမယ့် မကန့်ကွက်ရဲကြတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ကန့်ကွက်လိုက်ရင် ငါ့များဖမ်းမလား ဆိုပြီးတွေးပူတတ်ကြပါတယ်။ တွေးပူမနေပါနဲ့ ကန့်ကွက်မဲကိုသာ ရဲရဲထည့်ကြပါ။ ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ကိုလိုချင်လို့ လုပ်တဲ့ပွဲပါ။ ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူး ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး ပြတ်တ်သားသားဆုံးဖြတ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို မဖတ်လိုက်ရလုိ့ သူများထည့်သလို လိုက်ထည့်မယ်ဆိုတာ တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို မဖတ်လိုက်ရပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အမြင်တွေ၊ အကြားတွေ အားလုံးက တစ်ထပ်တည်းကျလားလို့ လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ကြပါ။ ကိုယ်နေ နေတဲ့နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မှာ ကောင်းသလား ဆိုးသလားကို သေချာသုံးသပ်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် မဲထည့်တဲ့အခါ ဘာကိုထည့်ရမယ်ဆိုတာကို သိရှိလာပါမယ်။
ကျနော်တို့ နိုင်ငံကအရင်ကထက် တိုးတက်နေတာလား? ဆုတ်ယုတ်နေတာလား? ဆိုတာ ကိုတွေးကြည့်ကြပါ။ဒီနေရာမှာကျနော့်ဘကြီးတစ်ယောက်ရဲ့စကားကိုသွား သတိရမိတယ် ``အရင်တုန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှရဲ့ ကျားတစ်ကောင်တဲ့ အခုတော့ ဖွတ်တောင် အဖေခေါ်ရတော့မယ်´´တဲ့လေ ကဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပေတော့။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ဘာဖြစ်လို့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်ကြ၊ ပညာသွားသင်ကြ လုပ်နေရတာလဲ။ သူများနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေရော ဘာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အလုပ်လာမလုပ်ကြတာလဲ ပညာလာမသင်ကြတာလဲ တွေးကြည့်လိုက်ပါ အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေက ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတာလဲ? ဘယ်သူတွေကြောင့် အခုလိုဖြစ်နေတာလဲ?။
စစ်အစိုးရက ၁၄နှစ်ကြာအချိန်ယူပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဟာ သူတို့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် သူတို့စိတ်ကြိုက် ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီး တစ်ဖက်သတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကြီးဆိုတာ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်မိတဲ့လူတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားတွေ မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ။ ကျနော်တို့တစ်တွေအားလုံး မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ရှေ့ရေးကို အရှည်တွေးလို့ အမှန်တရားအတွက် ကြက်ခြေခတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာ။
အမှန်တရားအတွက် ကြက်ခြေခတ်ကြပါ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:50 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်